ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၆)
ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၆)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 17, 2013 in Photography |9comments
-ရှေ့ အပိုင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ တဲ့ အပါချာ အကျဉ်းအကျယ်ကြောင့် အိတ်စပိုရှာပြောင်းလဲ သွားပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ထားရမဲ့ အချက်ကတော့ အပါချာကို အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရတဲ့ အခါမှာ ကျဉ်းပြီး၊ အလင်းရောင် နည်း တဲ့ အခါ ကျယ်ရပါမယ်။
အပါချာ အကျဉ်း/အကျယ်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှု နောက်တစ်ခုကတော့..
(၂) DOF (Depth of Field)
DOF ကိုဖြစ်စေတဲ့ ကျန်တဲ့ အချက်တွေရှိပါသေးတယ်..နောက် အပိုင်းမှာ DOF အတွက် သပ်သပ်ရေးပေးပါမယ်။
Depth of Field ဆိုတာကတော့ ပြတ်သားမှုနယ် ဖြစ်ပါတယ်.. ပြတ်သားမှု နယ်ဆိုတာက ဓာတ်ပုံတွေမှာ တချိူ့ ပုံတွေက အားလုံး ပြတ်သားနေပြီးတော့ တချို့ပုံတွေ ကျတော့ subject ကသာ ပြတ်ပြီး နောက်ခံတွေ၊ ရှေ့ခံ တွေ အကုန်ဝါးနေတာကို ပြောတာပါ။ လူပုံက ပြတ်သားပြီး နောက်ခံ က၀ါးသွားအောင် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေတွေ့ဖူးမှာပါ.. Subject ပဲ ပြတ်ပြီး ကျန်တာတွေ ၀ါးတာကို ပြတ်သားမှုနယ် ကျဉ်းတယ် (Shallow DOF) လို့ခေါ်ပြီး၊ အကုန်ပြတ်တာကို ပြတ်သားမှုနယ် ကျယ်တယ် (Large DOF ) လို့ခေါ်ပါတယ်.. ဒီမှာ ကြည့်ဗျာ..
အပါချာနဲ့ DOF ဟာပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်..အပါချာကျဉ်းရင် (ဒါမှမဟုတ်) အပါချာ နံပါတ်ကြီးရင် DOF ကျယ်ပါတယ်..
အပါချာနံပါတ် ကြီး ရင် အပါချာကျဉ်း ပြတ်သားမှုနယ် ကျယ်
အပါချာနံပါတ် ငယ်ရင် အပါချာကျယ် ပြတ်သားမှုနယ် ကျဉ်း
အပါချာနံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး DOF ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်.. ငယ်ရင်ကျဉ်းတယ် မှတ်မိတယ်နော်
အဲဒီတော့ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ subject ကိုပြတ်ပြီး နောက်တွေ ရှေ့တွေ ၀ါးသွားစေချင်ရင်အပါချာfနံပါတ်ကို ငယ်ရမယ်… Portrait ရိုက်တဲ့ အခါမှာ DOF ကို ကျဉ်းတာကောင်းပေမယ့် ရှုခင်း landscape ပုံရိုက်ရင်တော့ DOF ကို ကျယ်မှ ရပါမယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြင်နေရတဲ့ ရှုခင်းက ပါတာတွေ အကုန်ကို ပြတ်မှ ရမှာ ကိုး
DSLR ကင်မလာတွေမှာတော့ အပါချာ ကို priority ထားမယ်ဆိုရင် Av, A ကိုရွေးရပါမယ်။ အပါချာ priority ထားမယ်ဆိုရင် အပါချာကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အိတ်စပိုရှာ မှန်အောင် ရှက်တာစပိက သူ့ဘာသာသူ လိုက်ပြောင်းပါတယ်။ [နောက် ပိုင်းမှာ ထပ် ရေးပေးပါမယ်။]
low lighting ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အပါချာကို တတ်နိုင်သမျှ ကျယ်ပါ.. ဒါမှ အလင်းများများ ၀င်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bridge ကင်မလာတွေမှာ ကတော့ DSLR အတိုင်းလုပ်လို့ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အားသာပါတယ်..
ဒီတော့ အပါချာ အပိုင်းမှာ မှတ်သားရမဲ့ အချက်တွေက
low lighting ဆိုရင်fကို ငယ် (အပါချာ ကျယ်)
နေ့ခင်းဖက် နေပူတယ်ဆိုရင်fကို ကြီး (အပါချာ ကျယ်) f/11~f/14 လောက်ထားပါတယ်
လူပုံရိုက်ရင် လူပုံဆိုရင် DOF ကျဉ်းအောင်fကို ငယ် (အပါချာကျယ်) ပုံသေမဟုတ်ပေမယ့် အများဆုံး f/5.6 လောက်ထားပါတယ်။
ရှုခင်းဆိုရင် DOF ကျယ်အောင်fကို ကြီး (အပါချာ ကျဉ်း)
ကင်မလာ အသေးတွေမှတော့ ဒီလို အပါချာကို မပြင်နိုင်တဲ့ အတွက်မှောင်တယ်ဆိုရင် night mode ကိုပြောင်းရင် ရပါတယ်. ဒါဆို အပါချာ၊ ISO ကို အော်တို ချဲ့သွားပါတယ်။ နောက် လူပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် mode ကို portrait mode ကိုပြောင်း၊ ရှုခင်းဆိုရင် Landscape mode ကိုပြောင်း ရပါတယ်.. အဲဒီ mode တွေကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အခါ ကင်မလာက သူ့ဘာသာသူတွက်ချက်ပြီး ရိုက်သွားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကျန် အပိုင်းများ မကြာမီ ဆက်တိုက်ထွက်လာမည် မျှော့..
ပဆုံး လာတက်ဒယ်တွ …
ဟိုရိုက်နီးဒွေကို သင်တွားဒယ် …
လက်တွေ့လေး ဘာလေးလည်း ဆင်းဂျင်ဒယ် …
ကင်မလာ ခဏ ငှားဘာ ချရာ …
ခုံနံပတ် ၂ – ကေဇီ။
ဖဘမှာလည်း လိုက် ပြီးကြောင်း:::::
လိုက်ခ်တွေ အဆက်မပြတ် လုပ်ပေးနေတယ်နော်
“အပါချာနံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး DOF ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်.. ငယ်ရင်ကျဉ်းတယ် မှတ်မိတယ်နော်”…
ဟုတ်ကဲ့ .. ကြီးလို့ ကျယ်တယ်မှတ်ပါတယ်ဆရာ.. ကြီးကျယ်ပါတယ်..။
အံစာ ကတော်တော်လေး အနုပညာကို မြတ်နိုးပုံရ၏
ကို KZ တို့ကတော့ ပျက်ရက်မရှိ
ဥပေ ရေ ကျေးဇူးပါ
အော် ကိုနွေဦးက ကျယ်မှ ကြီိုက်တာကိုး ခွီးခွီးခွီး
နေပူ ၁၁ . မိုးအုံ့ ၈.. အရိပ်မှာဆို 5.6
နောက်မှထပ်ဖတ် ထပ်မှတ် ဦးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးး
နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံဖတ်ရှု့ခြင်းအတွက် အပိုကျူရှင်ကြေး မပေးနိုင်ပါကြောင်းးးးးးးး
ဆြာအုပ် သများလဲ လာတက်သွားတယ်နော်…
အပါချာ တွေ ဆြာအုပ်ပြောမှပဲ သိသွားတော့တယ်..
ကင်မရာမြင်ရင် တွေ.ကရာ ရှေ.က လှည့်လို.ရတာ အကုန်လှည့် ကြည့်ကောင်းဒါနဲ. ရိုက်ထည့်ပလိုက်တာပဲ.. ဟိဟိဟိ…
အခုတော့ ကျမ သိဘီ…. အဲအဲကျွန်တော်သိဘီ…..